ကြည်နူးလွမ်းမောစရာ BL အခန်းဆက် ဝတ္ထုလေးများ - For her Myanmar
မတွေ့ရတာ နည်းနည်း ကြာပြီနော်.. ဟိုတစ်ခါက Wattpad က အက်ဒ်မင်သဘောကျတဲ့ ဝတ္ထုလေးတွေကို စုပြီး ရေးပေးထားတာ ယောင်းတို့တွေ သဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ အက်ဒ်မင့်မှာ ပျော်လို့.. အဲဒီမှာ BL ဝတ္ထုကောင်းကောင်းလေးတွေလည်း စုပေးပါဆိုပြီး တောင်းဆိုကြတာတွေလည်း ရှိတော့ (အယ်လယ် ကိုယ်စကားခေါ်ထားတာ ထည့်မပြောဘူး :P) ဒီတစ်ခေါက်မှာ BL ကောင်းကောင်းလေးတွေ စုပေးလိုက်ပါတယ်လို့..
၁။ Quickly Wear The Face of Devil
ဟိုးအရှေ့မှာ အက်ဒ်မင် ပြောပြခဲ့တဲ့ ရှီရှန်းလို System ဇာတ်လမ်းမျိုးပါပဲ။ Arc အလိုက်သွားတဲ့ ဝတ္ထုတွေမို့လို့ ဝတ္ထုရှည်ကြီးတွေ မဖတ်ချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်ကလည်း ကျိုးယွင်ရှန့်နဲ့ သူ့(ရှူးဂါး)ဒယ်ဒီ နှစ်ယောက်ပဲ Arc တိုင်းမှာ ပါတာပါ။ ကျိုးယွင်ရှန့်က ဘဝပေါင်းထောင်နဲ့ချီ ဝင်စားခဲ့ရပြီး ဘဝတိုင်းမှာ ဗီလိန်လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့.. သူက နဂိုတည်းက မိန်းမတွေကို စိတ်မဝင်စားတဲ့သူပါ။ သူ အစွမ်းတွေရပြီး system ကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့ Lord God ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်က လွတ်သွားတဲ့အခါမှာ သူ့ကံကြမ္မာ သူဖန်တီးလာနိုင်ပါတော့တယ်။ (System ထဲကတော့ မလွတ်သေးဘူးပေါ့လေ..) မာယာပေါင်းစုံနဲ့ ကျိုးယွင်ရှန့် Lord God ဆီက တကယ်ရော လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား? သူ့ရဲ့ ဒယ်ဒီနဲ့ သူနဲ့ရော System ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား? ဘဝတိုင်းမှာရော ဒယ်ဒီ့ အချစ်ကို ရအောင်ယူနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုရမှာပါ ယောင်းတို့ရေ… ၁၈ယောက်အထက် စုဖတ်ရမယ့် အခန်း နည်းနည်းတော့ ပါပါတယ် 😀
၂။ The Grandmaster of Demonic Cultivation
Mo Dao Zu Shi နာမည်နဲ့ လူသိများပါတယ်။ အက်ဒ်မင့်အကြိုက်ဆုံး ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ စာရေးဆရာမ Mo Xian Tong Xiu ရဲ့ ဒုတိယမြောက် လက်ရာဖြစ်ပါတယ်နော်.. ဆရာမရဲ့ The Scum Villain’s self saving system (ပထမစာအုပ်) နဲ့ Heaven’s Official Blessing (တတိယ စာအုပ်) တို့လည်း နာမည်ကြီးပေမဲ့ Mo Dao Zu Shi က နာမည်အကြီးဆုံးလို့ ဆိုရင်တောင် ရမလားမသိဘူးရယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Mo Dao Zu Shi Donghua (Anime) က Season 1 အဆုံးထိ ထွက်ထားပြီး Season2က ဒီ ၂၀၁၉ မှာ ဆက်ထွက်လာမယ့်အပြင် (ခုတော့ Official Trailer ထွက်ထားပြီးပြီ .. အက်ဒ်မင်တော့ မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူးနော်.. T.T ) Manhua (manga) လည်း ထွက်နေတဲ့အပြင် The Untamed နာမည်နဲ့လည်း Live Action ဒရာမာ စီးရီးစ် ထွက်ရှိလာဦးမှာပါ။ အဲ.. Live Action ကတော့ Normal/ Bromance ပြောင်းထားတာလေး တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့နော်…
ဇာတ်လမ်းကတော့ မိစ္ဆာသခင်ကြီးဆိုပြီး လူတကာက ရွံကြောက်ကြီး ဖြစ်နေကြတဲ့ ဝေ့ဝူရှမ်းဟာ ဖုတ်၊သရဲ တွေကို ထိန်းကျောင်းပြီး ဖုတ်၊သရဲ စစ်တပ်ကြီးကို ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့သူပါ။ ဒါပေမဲ့ အထင်လွဲမှုတွေ၊ ရန်ငြိုးတွေကြားမှာပဲ ချေမှုန်းခံခဲ့ရပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ (ဇာတ်လမ်းကတော့ စကတည်းက မင်းသားသေတာပဲ :3 ) ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယဇ်ပူဇော်ပြီး ဝေ့ဝူရှမ်းကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့တဲ့ မော့ရွှမ်းယွီဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကြောင့် ဝေ့ဝူရှမ်းက သိုင်းလောကထဲ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ….
ဘယ်လို မုန်တိုင်းတွေကို ကျော်ဖြတ်ရဦးမှာလဲ?
သူ့ရဲ့ ရန်သူတွေကရော သူ့ကို အလွတ်ပေးမှာလား?
သူက ဝေ့ဝူရှမ်းဆိုတာကိုရော အဆုံးထိ လျှို့ဝှက်သွားနိုင်မှာလား? စတာတွေကို ရင်ခုန်လွမ်းမောစရာ ဖတ်ရှုရမှာပါ ယောင်းတို့ရေ… မြန်မာ ဘာသာပြန်တော့ “မှော်နက်အရှင်” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပြန်ထားတာ ရှိပါတယ်နော်…
ကဲ.. လာပါပြီ… ပြည်တွင်းဖြစ်လေးတွေ 😀 အမှန်တိုင်း ပြောရရင် အက်ဒ်မင်က ဘာသာပြန်တွေ ပိုသဘောကျတတ်သူပါ။ ကိုယ်က စာအရှည်ကြီးမှ ဖတ်ရတာ သဘောကျတဲ့သူဆိုတော့ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် ကျယ်ကျယ်၊ ခိုင်ခိုင်နဲ့ အပိုင်း ၁၀၀၀ ကျော် ဝတ္ထုတွေကိုမှ အဖတ်များတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရှားရှားပါးပါး အက်ဒ်မင် ဒီဝတ္ထုလေးတွေတော့ သဘောကျတယ်။ ဟင်.. အက်ဒ်မင် ညီဆိုတာ ဝတ္ထု တစ်ပိုင်းပဲ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်.. ဒါပေမဲ့ ညီကို ပြောရင် Ex-pect နဲ့ Pro ကိုလည်း ချန်ခဲ့လို့မရတော့ ၃ခုလုံး တစ်ခါတည်း ပြောပါ့မယ်…
အမှန်မှာ အက်ဒ်မင်က Ex-pect ကို အရင်ဖတ်ဖူးတာ၊ ဖတ်ရင်းနဲ့မှ ကိုယ်မသိတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေက အဆက်အစပ်နဲ့ ပါလာတော့ လူက အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီး Author “HsuChiko” ရဲ့ Stories တွေထဲ ဝင်မွှေတော့မှ ညီကို တွေ့တာပါ။ ဒါတောင် ချော်တောငေါ့ပြီး Pro ကို အရင်သွားဖတ်လိုက်သေးတယ် ပြီးကာမှ Pro မှာက ညီဝတ္ထုကို စီးရီးစ်ပြန်ရိုက်တဲ့အခါ တွေ့ဆုံကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် နှစ်ယောက်အကြောင်းဆိုတော့မှ ညီကို ပြေးဖတ်ရတဲ့ အဖြစ်ပါ။ 😀 အဲ့တော့ ယောင်းတို့လည်း ညီကို အရင်ဖတ်၊ ပြီးတော့မှ Pro ဖတ်ရင်ဖတ်၊ Ex-pect က နောက်မှ သီးသန့်ဖတ်ချင်ရင်ဖတ်၊ ဒီလို လုပ်လို့ရပါတယ်နော်.. ဇာတ်လမ်းကိုတော့ ပြောတော့ဘူး ယောင်းတို့ရယ်..၃ အုပ်တောင်ဆိုတော့….
ဒါပေမဲ့ ယောင်းတို့ အဲဒီဝတ္ထုတွေ ဖတ်ရင် LGBT အထူးသဖြင့် Gay တွေရဲ့ ဘဝကို သေချာ နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ အက်ဒ်မင်ကတော့ ဝတ္ထုဖန်တီးသူကို အရမ်းသဘောကျတာ အမှန်ပါ။ ဖြစ်သလို ဇာတ်လမ်းမဖွဲ့ဘဲ သေသေချာချာ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် အားထုတ်လေ့လာပြီး ရေးထားတာ အရမ်းကို လေးစားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ Pro မှာဆို စီးရီးစ်တစ်ခု ရိုက်ဖို့အရေး ဘာတွေ ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတာကစ၊ ဇာတ်ညွှန်းတွေအကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်ရေးတွေအကြောင်း ဖော်ပြထားတာက အသေးစိတ်ကျလွန်းတာ လက်ဖျားခါယူရပါတယ်။ (မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင် ရောင်းတမ်း အချစ်ဝတ္ထုတွေထဲမှာတောင် ဒီလို အားထုတ်မှုမျိုးက အတော်ကို တွေ့ရခဲတာမို့ ပိုပြီး လေးစားရပါတယ်လို့)
ဒီလောက်ဆို ယောင်းတို့ဖတ်စရာတွေ အများကြီး ရသွားလောက်ပါပြီနော်… Bonus အနေနဲ့ BL မဟုတ်ဘဲ လတ်တလော အက်ဒ်မင်အရမ်းသဘောကျနေပြီး ယောင်းတို့ကို ဖတ်စေချင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ပြောပြပေးမယ်နော်… အဲဒီ စာအုပ်တွေကတော့ Author Anna Lynn ရဲ့ Lucifer’s Bride, Neverland နဲ့ Rupture ပါ… စာရေးသူရဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေကို ပါးပါးလေး လှစ်ပြထားသလို ခံစားရပြီး သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အမြင်လေးတွေကို သဘောကျစရာ တွေ့ရတယ်လို့ အက်ဒ်မင်တော့ ထင်ပါတယ်။
အကျဒျမငျ့ အကွိုကျဆုံးတှေ စုထားပေးတာ ဟီး..
ယောငျးတို့ရေ…မတှရေ့တာ နညျးနညျး ကွာပွီနျော.. ဟိုတဈခါက Wattpad က အကျဒျမငျသဘောကတြဲ့ ဝတ်ထုလေးတှကေို စုပွီး ရေးပေးထားတာ ယောငျးတို့တှေ သဘောကကြွတယျဆိုတော့ အကျဒျမငျ့မှာ ပြျောလို့.. အဲဒီမှာ BL ဝတ်ထုကောငျးကောငျးလေးတှလေညျး စုပေးပါဆိုပွီး တောငျးဆိုကွတာတှလေညျး ရှိတော့ (အယျလယျ ကိုယျစကားချေါထားတာ ထညျ့မပွောဘူး :P) ဒီတဈခေါကျမှာ BL ကောငျးကောငျးလေးတှေ စုပေးလိုကျပါတယျလို့..
ဟိုးအရှမှေ့ာ အကျဒျမငျ ပွောပွခဲ့တဲ့ ရှီရှနျးလို System ဇာတျလမျးမြိုးပါပဲ။ Arc အလိုကျသှားတဲ့ ဝတ်ထုတှမေို့လို့ ဝတ်ထုရှညျကွီးတှေ မဖတျခငျြတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ အဆငျပွနေိုငျပါတယျ။ ဇာတျကောငျကလညျး ကြိုးယှငျရှနျ့နဲ့ သူ့(ရှူးဂါး)ဒယျဒီ နှဈယောကျပဲ Arc တိုငျးမှာ ပါတာပါ။ ကြိုးယှငျရှနျ့က ဘဝပေါငျးထောငျနဲ့ခြီ ဝငျစားခဲ့ရပွီး ဘဝတိုငျးမှာ ဗီလိနျလုပျခဲ့ရတာပေါ့.. သူက နဂိုတညျးက မိနျးမတှကေို စိတျမဝငျစားတဲ့သူပါ။ သူ အစှမျးတှရေပွီး system ကို ထိနျးခြုပျနတေဲ့ Lord God ရဲ့ လှမျးမိုးမှုအောကျက လှတျသှားတဲ့အခါမှာ သူ့ကံကွမ်မာ သူဖနျတီးလာနိုငျပါတော့တယျ။ (System ထဲကတော့ မလှတျသေးဘူးပေါ့လေ..)
မာယာပေါငျးစုံနဲ့ ကြိုးယှငျရှနျ့ Lord God ဆီက တကယျရော လှတျမွောကျနိုငျပါ့မလား?
သူ့ရဲ့ ဒယျဒီနဲ့ သူနဲ့ရော System ကနေ လှတျမွောကျနိုငျပါ့မလား?
ဘဝတိုငျးမှာရော ဒယျဒီ့ အခဈြကို ရအောငျယူနိုငျပါ့မလားဆိုတာ စိတျဝငျတစား ဖတျရှုရမှာပါ ယောငျးတို့ရေ… ၁၈ယောကျအထကျ စုဖတျရမယျ့ အခနျး နညျးနညျးတော့ ပါပါတယျ 😀
Mo Dao Zu Shi နာမညျနဲ့ လူသိမြားပါတယျ။ အကျဒျမငျ့အကွိုကျဆုံး ဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ စာရေးဆရာမ Mo Xian Tong Xiu ရဲ့ ဒုတိယမွောကျ လကျရာဖွဈပါတယျနျော.. ဆရာမရဲ့ The Scum Villain’s self saving system (ပထမစာအုပျ) နဲ့ Heaven’s Official Blessing (တတိယ စာအုပျ) တို့လညျး နာမညျကွီးပမေဲ့ Mo Dao Zu Shi က နာမညျအကွီးဆုံးလို့ ဆိုရငျတောငျ ရမလားမသိဘူးရယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Mo Dao Zu Shi Donghua (Anime) က Season 1 အဆုံးထိ ထှကျထားပွီး Season2က ဒီ ၂၀၁၉ မှာ ဆကျထှကျလာမယျ့အပွငျ (ခုတော့ Official Trailer ထှကျထားပွီးပွီ .. အကျဒျမငျတော့ မစောငျ့နိုငျတော့ပါဘူးနျော.. T.T ) Manhua (manga) လညျး ထှကျနတေဲ့အပွငျ The Untamed နာမညျနဲ့လညျး Live Action ဒရာမာ စီးရီးဈ ထှကျရှိလာဦးမှာပါ။ အဲ.. Live Action ကတော့ Normal/ Bromance ပွောငျးထားတာလေး တဈခုတော့ ရှိတာပေါ့နျော…
ဇာတျလမျးကတော့ မိစ်ဆာသခငျကွီးဆိုပွီး လူတကာက ရှံကွောကျကွီး ဖွဈနကွေတဲ့ ဝဝေူ့ရှမျးဟာ ဖုတျ၊သရဲ တှကေို ထိနျးကြောငျးပွီး ဖုတျ၊သရဲ စဈတပျကွီးကို ဖှဲ့စညျးနိုငျတဲ့သူပါ။ ဒါပမေဲ့ အထငျလှဲမှုတှေ၊ ရနျငွိုးတှကွေားမှာပဲ ခမြှေုနျးခံခဲ့ရပွီး သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ (ဇာတျလမျးကတော့ စကတညျးက မငျးသားသတောပဲ :3 ) ဒါပမေဲ့ တဈရကျမှာတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယဇျပူဇျောပွီး ဝဝေူ့ရှမျးကို ဆငျ့ချေါခဲ့တဲ့ မော့ရှမျးယှီဆိုတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျကွောငျ့ ဝဝေူ့ရှမျးက သိုငျးလောကထဲ ပွနျရောကျလာတဲ့အခါမှာ….
ဘယျလို မုနျတိုငျးတှကေို ကြျောဖွတျရဦးမှာလဲ?
သူ့ရဲ့ ရနျသူတှကေရော သူ့ကို အလှတျပေးမှာလား?
သူက ဝဝေူ့ရှမျးဆိုတာကိုရော အဆုံးထိ လြှို့ဝှကျသှားနိုငျမှာလား? စတာတှကေို ရငျခုနျလှမျးမောစရာ ဖတျရှုရမှာပါ ယောငျးတို့ရေ… မွနျမာ ဘာသာပွနျတော့ “မှျောနကျအရှငျ” ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ပွနျထားတာ ရှိပါတယျနျော…
ကဲ.. လာပါပွီ… ပွညျတှငျးဖွဈလေးတှေ 😀 အမှနျတိုငျး ပွောရရငျ အကျဒျမငျက ဘာသာပွနျတှေ ပိုသဘောကတြတျသူပါ။ ကိုယျက စာအရှညျကွီးမှ ဖတျရတာ သဘောကတြဲ့သူဆိုတော့ ဇာတျလမျး ဇာတျအိမျ ကယျြကယျြ၊ ခိုငျခိုငျနဲ့ အပိုငျး ၁၀၀၀ ကြျော ဝတ်ထုတှကေိုမှ အဖတျမြားတာပါ။ ဒါပမေဲ့ ရှားရှားပါးပါး အကျဒျမငျ ဒီဝတ်ထုလေးတှတေော့ သဘောကတြယျ။ ဟငျ.. အကျဒျမငျ ညီဆိုတာ ဝတ်ထု တဈပိုငျးပဲ မဟုတျဘူးလားဆိုတော့ ဟုတျတော့ဟုတျတယျ.. ဒါပမေဲ့ ညီကို ပွောရငျ Ex-pect နဲ့ Pro ကိုလညျး ခနျြခဲ့လို့မရတော့ ၃ခုလုံး တဈခါတညျး ပွောပါ့မယျ…
အမှနျမှာ အကျဒျမငျက Ex-pect ကို အရငျဖတျဖူးတာ၊ ဖတျရငျးနဲ့မှ ကိုယျမသိတဲ့ ဇာတျကောငျတှကေ အဆကျအစပျနဲ့ ပါလာတော့ လူက အူကွောငျကွောငျဖွဈပွီး Author “HsuChiko” ရဲ့ Stories တှထေဲ ဝငျမှတေော့မှ ညီကို တှတေ့ာပါ။ ဒါတောငျ ခြျောတောငေါ့ပွီး Pro ကို အရငျသှားဖတျလိုကျသေးတယျ ပွီးကာမှ Pro မှာက ညီဝတ်ထုကို စီးရီးဈပွနျရိုကျတဲ့အခါ တှဆေုံ့ကွတဲ့ သရုပျဆောငျ နှဈယောကျအကွောငျးဆိုတော့မှ ညီကို ပွေးဖတျရတဲ့ အဖွဈပါ။ 😀 အဲ့တော့ ယောငျးတို့လညျး ညီကို အရငျဖတျ၊ ပွီးတော့မှ Pro ဖတျရငျဖတျ၊ Ex-pect က နောကျမှ သီးသနျ့ဖတျခငျြရငျဖတျ၊ ဒီလို လုပျလို့ရပါတယျနျော.. ဇာတျလမျးကိုတော့ ပွောတော့ဘူး ယောငျးတို့ရယျ..၃ အုပျတောငျဆိုတော့….ဒါပမေဲ့ ယောငျးတို့ အဲဒီဝတ်ထုတှေ ဖတျရငျ LGBT အထူးသဖွငျ့ Gay တှရေဲ့ ဘဝကို သခြော နားလညျသှားပါလိမျ့မယျ။
အကျဒျမငျကတော့ ဝတ်ထုဖနျတီးသူကို အရမျးသဘောကတြာ အမှနျပါ။ ဖွဈသလို ဇာတျလမျးမဖှဲ့ဘဲ သသေခြောခြာ နှိုကျနှိုကျခြှတျခြှတျ အားထုတျလလေ့ာပွီး ရေးထားတာ အရမျးကို လေးစားစရာ ကောငျးပါတယျ။ ဥပမာ Pro မှာဆို စီးရီးဈတဈခု ရိုကျဖို့အရေး ဘာတှေ ဘယျလို လုပျရတယျဆိုတာကစ၊ ဇာတျညှနျးတှအေကွောငျး၊ ထုတျလုပျရေးတှအေကွောငျး ဖျောပွထားတာက အသေးစိတျကလြှနျးတာ လကျဖြားခါယူရပါတယျ။ (မှနျတဲ့အတိုငျးပွောရရငျ ရောငျးတမျး အခဈြဝတ်ထုတှထေဲမှာတောငျ ဒီလို အားထုတျမှုမြိုးက အတျောကို တှရေ့ခဲတာမို့ ပိုပွီး လေးစားရပါတယျလို့)ဒီလောကျဆို ယောငျးတို့ဖတျစရာတှေ အမြားကွီး ရသှားလောကျပါပွီနျော…
Bonus အနနေဲ့ BL မဟုတျဘဲ လတျတလော အကျဒျမငျအရမျးသဘောကနြပွေီး ယောငျးတို့ကို ဖတျစခေငျြတဲ့ စာအုပျလေးတှေ ပွောပွပေးမယျနျော… အဲဒီ စာအုပျတှကေတော့ Author Anna Lynn ရဲ့ Lucifer’s Bride, Neverland နဲ့ Rupture ပါ… စာရေးသူရဲ့ အတှေးအချေါလေးတှကေို ပါးပါးလေး လှဈပွထားသလို ခံစားရပွီး သူ့ရဲ့ လှတျလပျတဲ့ အမွငျလေးတှကေို သဘောကစြရာ တှရေ့တယျလို့ အကျဒျမငျတော့ ထငျပါတယျ။
Tags: BL, Book review, Boys' Love, collection, Read, Wattpad
Wathun February 22, 2019